Fadin-tseranana : averina anio ny fanadinana | NewsMada
Fadin-tseranana : averina anio ny fanadinana
Averina anio ilay fanadinana fifaninanana hidirana ho mpiasan’ny fadin-tseranana izay nofoanana vokatry ny laza adina tsy tomombana tsara ka niteraka savorovoro, iray volana lasa izay.
Amin’ity fanadinana andiany voalohany ity no hifantenana ireo antsasaky ny mpiadina izay tsara naoty ka hiatrika indray ny fifaninanana manaraka.
Tsiahivina fa handraisana inspecteur des douanes 30 sy controleurs des douanes 100 ary agents d’encadrement des douanes 100 ity fifaninanana ity.
Hotanterahina any amin’ny 22 septambra any kosa ny fifaninanana andiany faharoa aorian’izao fifantenana ny mpiadina amin’ny andiany voalohany izao.
Araka ny fanazavana, tsy miova ny laharan’ny mpiadina sy ny toerana hiadinana ary ny efitranom-panadinana afatsy ny an’ny mpiadina hiditra ho « agent d’encadrement » teto Antananarivo niadina teny amin’ny cathédrale Degs Ankatso izay nafindra any amin’ny lycée Rabearivelo Analakely.
Toraka izany ny mpiadina tao amin’ny lycée Raherivelo Ramamonjy Fianarantsoa izay hafindra any amin’ny CEG Joel Rakotomalala Mahamanina Fianarantsoa.
Mbola manankery avokoa ny taratasy fiantsoana.
Tsy hisy fiovana ny ora sy ny faharetan’ny fanadinana araka ny efa voasoratra any anatin’ny taratasy fiantsoana.
Hentitra ny mpikarakara fanadinana fa voarara tanteraka ny fitondra finday na fitaovana mitovy amin’izany any amin’ny efitra fiadinana. Izay mbola minia mitazona izany eny aminy mandritra ny fanadinana, havoaka ny efitra eo no ho eo ary tsy afaka ny hanohy fanadinana intsony.
Tsiahivina fa niteraka savorovoro ity fanadinana ity teo aloha satria tsy ampy ny taratasin’ny laza adina ka niteraka fahatarana be teo amin’ny fanombohana ny fanadinana. Nofoanana tanteraka mihitsy izany ka izao naverina izao indray.
Efa nilokaloka ny mpikarakara fifaninanana fa iarahana amin’ny Bianco ny fifaninanana rehetra ka hangarahara tanteraka izany. Tsy hisy ny kolikoly izay nampalaza ny fanadinana hididrana ho mpiasan’ny fadin-tseranana hatramin’izany.